Sary FMF Madagascar
Nirava ady sahala, 1 noho 1 ny Barea an’i Madagasikara sy ny Bafana Bafana Afrikanina Tatsimo, androany tao Zambia. I Madagasikara no nampidi-baolina voalohany, tamin'ny alalan'i Avizara (55'), raha toa ka samy tsy nisy nitoko ny roa tonta teo amin’ny fizaram-potoana voalohany, izay vao nosahalain’ny Afrikana Tatsimo. Voahosotra ho mpilalao mendrika nandritra iny lalao iny i Balvano, mpiandry haraton’ny Barea an’i Madagasikara. Samy nahavita lalao faharoa avy izao ny ekipa roa tonta. Ny nosy Maorisy no ekipam-pirenena manaraka hifandona amin’i Madagasikara, raha i Lesotho kosa no ho adverseran’i Afrika Atsimo. (Jereo Sary Tohiny)